Capsule Filling Machine ဆိုတာ ဘာလဲ။ဆေးတောင့်ဖြည့်စက်များသည် အချည်းနှီးသော ဆေးတောင့်ယူနစ်များကို အစိုင်အခဲများ သို့မဟုတ် အရည်များဖြင့် အတိအကျ ဖြည့်ပေးသည်။encapsulation လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆေးဝါးများ၊ အာဟာရဆေးများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုသည်။Capsule fillers သည် အစိုင်အခဲများစွာဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်...
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များနယ်ပယ်တွင် CBD သည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သနည်း။
admin မှ 21-04-21 ရက်နေ့တွင်
1. CBD ဆိုတာဘာလဲ။CBD (ဆိုလိုသည်မှာ cannabidiol) သည် ဆေးခြောက်၏ အဓိက စိတ်ရောဂါမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။CBD တွင် စိတ်ပူပန်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ စိတ်ရောဂါကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ antiemetic နှင့် ရောင်ရမ်းမှု ဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများ အပါအဝင် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အမျိုးမျိုးရှိသည်။Web of Science၊ Scielo နှင့် Medline တို့မှ ပြန်လည်ရယူသည့် အစီရင်ခံစာများအရ...
Metformin သည် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်များ ရှိသည်။
1. WuXi AppTec ၏ အကြောင်းအရာအဖွဲ့ Medical New Vision မှ လူပေါင်း 10,000 ကို လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် metformin သည် ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်း 1. ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုနှင့် သေဆုံးနိုင်ခြေကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။t တွင်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတစ်ခု ...
တက်ဘလက်အစို granulation လုပ်ငန်းစဉ်
တက်ဘလက်များသည် လက်ရှိတွင် အသုံးအများဆုံး သုံးစွဲမှုပုံစံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အထွက်အများဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။မိရိုးဖလာအစို granulation လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးတွင် ပင်မလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။၎င်းတွင် ရင့်ကျက်သော ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ၊ ကောင်းမွန်သော အမှုန်အမွှား အရည်အသွေး ၊ မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှု ...